May 16 is the Last Day to Safely Mail Ballots - Somali | Multnomah County
Talaada, 14-ka Maajo, 2019
Khamiista, 16-ka Maajo waa Maalinta ugu Dambayso ee in si Ammaan ah Warqadaha Cod-bixinta loo Diri karo. Cod-bixiyayaashu waxay heli karaan kaalmo codaynta ah ama inay ka qaataan warqad codayn baddalkeed laba meelood oo Degmada Multnomah ah saacadaha dheeraadka ah
Khamiista, 16-ka Maajo waa maalinta ugu dambaysa in cod-bixiyayaasha Degmada Multnomah ay si ammaan ah ay ku soo diraan warqadahooga cod-bixinta loogu talogalay Doorashada Degmada Gaarka ah ee Talaadada, 21-ka Maajo. Warqadaha codaynta waxaa lagu soo diri karaa hal ah calaamadda boostada darajada koowaad. Baqshadaha warqadaha cod-bixinta waa in la saxeexaa oo warqadaha cod-bixintana ay helaan xafiiska doorashooyinka marka la gaadho 21-ka Maajo, 8:00 fiidnimo. Calaamadaha boostada lama xisaabiyo Oregon.
Dhammaan cod-bixiyayaasha diiwaangashan waa inay heleen warqadaha cod-bixinta. Cod-bixiyaasha diiwaangashan ee aan helin warqadahooda cod-bixinta ama u baahan baddal waa inay la xidhiidhaan xafiiska doorashooyinka. Amarka ka Horreeya Adeegga Baddalidda Warqadaha Cod-bixinta wuxuu u oggolaanayaa cod-bixiyayaasha inay booqdaan onlayn multco.us/orderahead , codsadaan baddalid warqadaha cod-bixinta oo ay diyaar ku ahaadaan "Will Call." Cod-bixiyayaashu kadib waxay ka qaadan doonaan warqadaha cod-bixinta ee baddalka ah Dhismaha Doorashooyinka Duniway-Lovejoy ee Degmada Multnomah ee ku yaala 1040 SE Morrison Street, Portland 97214 ama Goobta Cod Bixinta gudaha Dhismaha Bariga Degmada Multnomah ee ku yaala 600 NE 8th Street, Gresham 97030. Cod-bixiyayaasha waxay sidoo kale ka wici karaan Doorashooyinka Degmada Multnomah 503-988-3720 ama toos u booqan karaan goobaha SE Portland ama Gresham si ay u helaan gargaar ama baddalka warqadaha cod-bixinta.
Doorashooyinka Degmada Multnomah waxay ka fureen goobo dheeraad ah Gresham ilaa Maalinta Doorashada ee 21-ka Maajo. Goobta Cod Bixinta waxay ku taala gudaha Dhismaha Bariga Degmada Multnomah. Cod-bixiyayaashu waxay baddali karaan warqadda cod-bixinta ee luntay, heli karaan kaalmo codaynta ah, su’aalo ayay waydiin karaan, ama waxay iyaga oo socda iman karaan si ay u codeeyaan Goobta Cod Bixinta ee ku taala suuqa hoose ee Gresham. Waraaqaha cod-bixinta ayaa kaliya la aqbali karaa Goobta Cod Bixinta saacadaha ay shaqaynayso. Sanduuqa ugu dhow ee rasmiga ah ee 24-ka saacadood furan ee warqadaha cod-bixintu waxa uu ku yaalaa baarkinka ku yaala Maktabadda Gresham ee ku taala 385 NW Miller Avenue.
Saacadaha shaqada ee caadiga ah ee Doorashooyinka Degmada Multnomah ee goobaha SE Portland iyo Gresham waa 8:00 subaxnimo - 5:00 galabnimo Isniinta - Jimcaha. Saacadaha la kordhiyay ee shaqada xafiiska Doorashada Degmada Gaarka ah ee 21-ka Maajo ayaan hoos ku qoran.
Sabti, 18-ka Maajo, 10:00 subaxnimo - 2:00 duhurnimo
Isniin, 20-ka Maajo, 8:00 subaxnimo - 7:00 fiidnimo
Maalinta Doorashada, Talaada, 21-ka Maajo, 7:00 subaxnimo - 8:00 fiidnimo
Cod-bixiyayaasha waxay isku diiwaangalin karaan si ay ula socdaan warqaddooda cod-bixinta una helaan dhejiska aan la taaban karin ee "Waan codeeyay". Farriin, iimeyl, ama wargelin cod ah ayaa u sheegaya cod-bixiyeyaasha markii xafiiska doorashada gobolka aya boosta soo dhigaan warqadaha cod-bixinta. Wargelino ayaa muujinaya haddii warqadda cod-bixinta la aqbalay in la tiriyo ama haddii ay cod-bixiyaha uga baahan tahay shaqo dheeraad ah. Gudaha farriinta "Cod-bixinta la Aqbalay" cod-bixiyayaashu waxay heli doonaan istikarrada Oregon ee gaarka ah ee "Waan Codeeyay" ah oo diyaar u ah inay ku wadaagaan warbaahinta bulshada. Cod-bixiyayaasha Degmada Multnomah waxay iska diiwaangalin karaan iyagoo booqanaya multnomah.ballottrax.net.
Doorashooyinka Degmada Multnomah waxaa laga helayaa turjubaan bilaash ah oo uu heli karo qof walba oo u baahan in lagu caawiya inuu ku codeeyo luqad aan Af Ingriis aheyn. Macluumaad dheeraad ah oo ku saabsan codaynta iyo doorashooyinka oo ku qoran sagaal luqadood waxa laga heli karaa onlayn multco.us/education-and-outreach.
Cod-bixiyayaasha aan soo celin warqadahooga cod-bixinta waxay iman karaan mid ka mid ah goobaha rasmiga ah ee lagu rido ee 24-ka saacadood oo ku yaala degmada oo dhan ka hor Talaadada 8:00 fiidnimo, 21-ka Maajo. Cod-bixiyayaasha ayaa sidoo kale ku ridi kara warqadahooga cod-bixinta goob kasta Maktabadda Degmada Multnomah inta lagu jiro saacadaha shaqada ee maktabadda, multcolib.org/hours-and-locations.
Hoos waxa ku qoran iyo onlayn: multco.us/dropsites ayaa dhammaan ah goobaha cod-bixinta rasmiga ku ridista ee 24-ka saacadood iyo goobaha Maktabadda Degmada Multnomah oo la heli karo ilaa 8:00 habeenimo habeenka doorashada, Talaadada, 21-ka Maajo.
Goobaha Rasmiga ah ee lagu rido warqadaha cod-bixinta ee 24-ka saacadood:
Dhismaha Doorashooyinka Duniway-Lovejoy ee Degmada Multnomah: 1040 SE Morrison St., Portland (Goobaha sanduuqyada: dhanka bari ee Koonfurbari 11aad inta u dhaxaysa Koonfurbari Morrison iyo Belmont iyo dhinaca waqooyi ka xigta Koonfurbari Belmont inta u dhaxaysa Koonfurbari 10aad iyo 11aad)
Maktabadda Dhexe: 801 SW 10th Ave., Portland buugga bannaanka ee lagu celinayo ee maktabadda dabadeeda oo ku yaala SW 11th Ave.
Tukaanka Goodwill: 3134 N Lombard St., Portland
Makhaayadda McDonald: 2010 NE Cesar E. Chavez Blvd., Portland (Goobta sanduuqa: dhinaca galbeed ee Northeast 40th Ave. inta u dhaxaysa jidadka NE Tillamook iyo NE Hancock)
CUSUB! Parkrose Neighborhood: 4390 NE 102nd Ave., Portland (Goobta sanduuqa: baarkinka gaadiidka bariga ee kasoo horjeeda jidka Xarunta MHCC Maywood Park ee NE 102nd iyo NE Prescott)
Pioneer Courthouse Square: 700 bologga SW Broadway, Portland (Ku xiga Starbucks iyo ka soo horjeeda Nordstrom - Goobta Bilaa Wiishka ah).
Portland - sanduuqa ku ridista yaala baarkinka Regal Cinemas ee ka dambeeya M & M Car Wash
Dhexe: 801 SW 10th Ave., Portland
Furan 6 - 21-ka Maajo, 2019
Goobta Cod Bixinta ee Gresham waxay Furnaan 6 - 21-ka Maajo ee Doorashada Degmada ee Gaarka ah ee 21-ka Maajo
Doorashooyinka Degmada Multnomah Waxay Caawiyaan Cod-Bixiyayaasha Naafada Ah ama Cod-Bixiyayaasha Ugu Baahan Caawimaad Afkooda Ay Doorbidayaan